Wonke umuntu kumele bazi ukuthi amasignali lapho kunesimo esibi ngamazwe. Phela, naphezu kweqiniso lokuthi namuhla konke kuhamba kahle, asazi ukuthi yini ukupheka nathi ukuphila ngoba kusasa. Yingakho kubaluleke kangaka ukuze uzivikele wena ukuqonda simiso izimpawu.
Izimpawu namakhodi babonwa wamukela wonke amazwe, izilimi, kanye nezinsiza zokutakula. Believe me, bangabe besakhonza wokutakula akusho ukudida izibonakaliso ozama ukudlulisela.
isignali SOS ubhekwa lapho kucelwa usizo, kusukela English ngokuvamile lihunyushwa ngokuthi "Londoloza Imiphefumulo yethu". isiginali okunjalo angadluliselwa ngezindlela ezahlukene, kusukela leli phuzu akashintshi. Ngokwesibonelo, izincwadi ezintathu idatha kungenziwa wabeka out kusuka amatshe ogwini, noma esebenzisa namagatsha edlelweni enkulu evulekile.
isignali SOS ingathunyelwa kusuka mkhathi, kokuba sebenamakhulu ezintathu ezinkulu kwi emphemeni uqobo. Lokhu isignali angadluliselwa futhi Morse code, usebenzisa isignali ngakanye namkha inethiwekhi umsakazo. Qiniseka ukukhumbula ikhodi elandelayo: odwi ezintathu, amachashazi amathathu, kolayini ezintathu.
amasignali lapho kunesimo esibi International kukhona izwe ngalinye okufanayo. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi babe, ukhululeke ukuzisebenzisa. Njengoba usizo kuyofika ngokushesha okungaka.
Uma ezintabeni, kubalulekile ukusebenzisa isignali ye "eziyisithupha nanye." Okusho ukuthi, okokuqala kumele ibe mifisha izinhlamvu eziyisithupha, bese sithi ukuhlaba ikhefu. Kulokhu kungenzeka amasignali enikeziwe ngakulahla nganoma iyiphi indlela etholakalayo. Ngokwesibonelo, ungasebenzisa ikhwela noma isibani enamandla. Ngakho uma uya ku ezintabeni Zivikele futhi uthathe lezi zinto.
amasignali lapho kunesimo esibi International azisetshenziswa ezintabeni, ebizwa ngokuthi "ezintathu nanye." Okungukuthi, kuqala wakhonza imisindo emithathu emfushane ke kokuhlaba ikhefu isikhathi eside. Kubalulekile ukusebenzisa ngendlela efanele izimpawu ukuthi aye atholakala ngokuqondile njengoba amasignali lapho kunesimo esibi. Uma usebenzisa i-ikhwela noma flashlight, iposi emithathu emfushane, izimpawu ezicacile, khona-ke thatha ikhefu ngomzuzu. Bese uphinda amasignali futhi.
Indlela ukubiza usizo ehlathini
Uma ulahleke ehlathini, yithemba nje hhayi zinkulu. Ngisho endaweni eyihlane enjalo, ungakwazi ukulinda ukuze uthole usizo. Ukusebenzisa amasignali lapho kunesimo esibi ngamazwe ehlathini, ungakwazi kudonse abatakuli.
Isignali ngempumelelo kakhulu futhi obonakalayo kubhekwe komlilo. Izinkuni ehlathini ngokuqinisekile suffice. Into esemqoka kwenzekani umkhankaso ukuletha inani elikhulu okufanayo.
Yiqiniso, ukuphumelela umlilo incike indawo yokuzalanisa wakhe. Uma ekuvuseni ke ezansi umhosha noma ehlathini, ezinhle kuyoba kancane, futhi akunakwenzeka uzokwazi ukuheha lokhu ukunakwa.
Enye into - ukwenza umlilo emaphandleni evulekile iyabonakala kalula. Ngenxa yalesi enhle ehlathini evulekile noma elibheke phezulu egqumeni. Kukhona Ezimweni eziningi lapho endaweni sezulu omuhle ezolile, umusi imililo kuze kufinyelele ibanga ngamashumi amahlanu amakhilomitha ngenhla eliphansi. Nokho, ukuze sifinyelele lo mphumela, umlilo uqobo kufanele abe babebaningi kakhulu.
Sicela uqaphele ukuthi uma okhela umlilo kuphela uye waphawula indoda yakhe akakwazi ucabange ukuthi usengozini. International isignali efanayo ukucindezeleka ezocatshangelwa ezintathu umlilo emgqeni efanayo mpo, noma zibekwe njengoba unxantathu.
Ibanga phakathi imililo akufanele kube amamitha esingaphansi amahlanu. Ngesikhathi esifanayo ukulungiselela amasheya elikhulu izingodo ezomile, ngoba kuyoba esidumazayo kakhulu uma ngesikhathi esifanele ke kuzophela, futhi uzohlala engabonwa.
amasignali wokutakula International umkhumbi
Uma bexakekile emkhunjini ke unake lezi zimpawu esindisa impilo zazo ngokulinganayo uguqulwa kuphi, kungakhathaliseki lapho obukhona:
uma kukhona ukuvuleka, qiniseka ukusebenzisa ke;
wenze ilangabi evulekile, siqiniseke ukuthi awusebenzi isatshalaliswa umkhumbi ngezintambo;
ujike ifulege lesizwe;
ukuthumela isignali ifulege;
Sebenzisa imisindo okuqhubekayo ukuthi khiqiza phi amafoni cell, amasignali yokudla hazy;
Kancane kancane, uphakamise wehlise izingalo emaceleni abahlukanisile.
International ishadi ukucindezeleka ukusiza ukudlulisela amakhodi ezidingekayo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka babeka izimpawu ezimfundeni ovulekile futhi emagqumeni. I ezinkulu nezibonakaliso, aba maningi amathuba okuba ukuthi uzophawula usuka endaweni ephakeme kakhulu.
Izimpawu ingenziwa yini eza kunika: kusukela zezingubo zokugqoka, amadwala, amahlahla. Ogwini lolwandle ungakwenza lokhu ngosizo ulwelwe noma amatshe. Kunoma ikuphi kubaluleke kakhulu ukufeza lokhu kuhluke kanjani umbala.
Noma isiphi isimo ongase iwe, ungalilahli ithemba. Noma ngabe ukuphi kwenzeke ukuba: ezintabeni, ehlathini noma phezu kolwandle, ungasebenzisa izinhlamvu lokusindisa, futhi uqiniseka ukusiza. Eqhubekela phambili ukushaywa ezintabeni noma ehlathini, ungakhohlwa ukuthatha flashlight, amakhwela okufanayo. Zama ukwenza ngokwayo wazizwa kwafana ngangokunokwenzeka.
Inkonzo yezempi - ukuthi ungubani na? Ubudala futhi isigaba angamarizevu
Izimpawu nezimo zokusebenza, ugcwalise isampuli. Uhlu imisebenzi nge izimo zokusebenza enobungozi
Ohhavini esakhelwe ngaphakathi - kuzibuyekezo, izintengo. Kanjani ukwakha eziko ngezandla zakhe
Indlela ukulungiselela inthavyu ukuthola umsebenzi
Irradiator amagciwane: izici. I irradiator amagciwane OPL-150